News Journal Format 1
အခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်းသည် နိုင်ငံတစ်ခု အတွက် ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်၏ အခြေခံ အုတ်မြစ်ဖြစ်သည့်အပြင် နိုင်ငံတစ်ခု ချမ်းသြွာကယ်ဝ ခြင်းအတွက် အရေးပါသောအချက်လည်းဖြစ်သည်။ အခွန် စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်းသည် ပညာရေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စီးပွားရေးအခြေခံ အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လူမှုဖူလုံရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း အစရှိသည့် အစိုးရအဖွဲ့တစ်ရပ်၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ အားလုံးအတွက် ဘဏ္ဍာရေးအခြေခံအရင်းအမြစ်လည်း ဖြစ်သည်။ အခွန်စည်းကြပ်မှုမှ ရရှိသောဝင်ငွေသည် နိုင်ငံတစ်ခုရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အခြေခံ ပင်ဖြစ်သည်။ ဘဏ္ဍာရေးရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုသည် အစိုးရအဖွဲ့၏ အရင်းအနှီးနှင့် ကြီးပွားစည်ပင်သော လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ကို အာမခံပေးမည့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော လိုအပ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခွန်စနစ်တွင် ထုတ်လုပ်မှုနှင့်သုံးစွဲ မှုဆိုင်ရာ အခွန်အခများ၊ ဝင်ငွေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ အခွန်အခများ၊ အကောက်ခွန်နှင့် နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းများ သုံးစွဲမှုဆိုင်ရာ အခွန်အခများဟူ၍ ကဏ္ဍလေးရပ်ခွဲခြား ထားကာ စုစုပေါင်းအခွန်အမျိုးအစား ၂၁ မျိုးစည်းကြပ် ကောက်ခံလျက်ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင် နေကြသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနက စီမံခန့်ခွဲသော ဝင်ငွေ ခွန်ဥပဒေ၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ၊ အထူးကုန်စည် ဥပဒေ၊ တံဆိပ်ခေါင်းဥပဒေနှင့် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန် အကောက်ဥပဒေအစရှိသော ဥပဒေငါးရပ်ကို မဖြစ်မနေ လေ့လာသိရှိထားရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ၊ အထူးစီးပွားရေးဇုန်များဥပဒေတို့ အပြင် စီးပွားရေးနှင့်ဆက်စပ်သော အခြားဥပဒေများကိုလည်း လေ့လာထားရမည်ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွား ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့သော်လည်း စုစုပေါင်းအခွန် ကောက်ခံရငွေနှင့် ဂျီဒီပီအချိုးတွင်မူ အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသအတွင်း၌ အနည်းဆုံးဖြစ်ရုံသာမက ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ အနက် အနည်းဆုံးဆယ်နိုင်ငံစာရင်းတွင် ပါဝင်သည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
Heritage Foundation (2015) ၏ 2015 Macro-Economic Data အစီရင်ခံစာနှင့် Index of Economic Freedom အစီရင်ခံစာတို့ကို ကိုးကား၍ အင်တာနက် စွယ်စုံကျမ်း (Wikipedia) တွင် ဖော်ပြထား သော ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံများ၏ အခွန်အကောက်ခံရငွေနှင့် ဂျီဒီပီအချိုးဇယား ၌ မြန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံပေါင်း ၁၇၉ နိုင်ငံ အနက်၊ အဆင့် ၁၇၀ တွင် ရပ်တည်ကာ အချိုးအားဖြင့် ၄.၉ သာရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
အခြားသော အာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံများနှင့် နှိုင်း ယှဉ်ချက်ကို ဇယား(၁)တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
Paying Taxes 2018 အစီရင်ခံစာ
Paying Taxes အစီရင်ခံစာသည် ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် ယူကေနိုင်ငံအခြေစိုက် PWC UK တို့က ၂၀ဝ၄ ခုနှစ်မှ စတင်၍ နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်လာသော ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၀ ၏ အခွန်ပေးဆောင်မှုအခြေအနေပြ အစီရင် ခံစာ ဖြစ်သည်။
ဤအစီရင်ခံစာတွင် အခွန်ပေးဆောင်မှုပမာဏကို သာမက အခွန်ထမ်းကုမ္ပဏီတို့က ယင်းတို့၏ အခွန်ထမ်း တာဝန်ကျေပွန်ရန် အချိန်မည်မျှကြာမြင့်သည်ကို ထည့် သွင်းအကဲဖြတ်သည်။ ကြာမြင့်ချိန်ကို တွက်ချက်ရာ၌ ပင်မအခွန်များပေးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ပြင်ဆင်ရန် ကြာမြင့်ချိန်ကိုသာမက VAT(Value Added Tax) ပြန် အမ်းငွေရရှိရန် ကြာမြင့်ချိန်ကိုလည်း ထည့်သွင်းတွက်ချက်သည်။
၂၀ဝ၄ ခုနှစ်မှစတင်၍ သတင်းအချက်အလက်များ ကောက်ခံလာခဲ့သည့် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများမှာ နည်းပညာအပြောင်းအလဲများ ပြုလုပ်လာခဲ့သည်ကို မြင် တွေ့ခဲ့ရပြီး အင်တာနက်အွန်လိုင်းမှတဆင့် ကြေညာလွှာ တင်သွင်းခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်းစသည်တို့ကို ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲများ အသုံးပြုဆောင်ရွက်လာခဲ့ကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရသည်။ ထိုသို့နည်းပညာ အပြောင်းအလဲများ ပြုလုပ်လာခြင်းဖြင့် Paying Taxes က သတင်းအချက် ကောက်ယူသော ကုမ္ပဏီတစ်ရပ်သည် ယင်း၏ အခွန်ကြေညာလွှာတင်သွင်းရန် ပြင်ဆင်မှုကြာမြင့်ချိန် ကို ၂၀ဝ၄ ခုနှစ်နှင့် နှိုင်းစာပါက ၂၀၁၆ ခုနှစ်၌ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၈၁ နာရီမျှ လျှော့ချနိုင်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ ရှိရသည်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအားဖြင့် ပျမ်းမျှရလဒ်မှာ ထိုမျှအထိ သိသာထင်ရှားစွာ တိုးတက်ပြောင်းလဲ လာခဲ့သော်လည်း ဝင်ငွေနိမ့်နိုင်ငံများတွင် နည်းပညာ အပြောင်းအလဲမှာ နှေးကွေးလျက်ရှိသည် မြင်တွေ့နေရဆဲ ဖြစ်ကြောင်း Paying Taxes 2018 အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ထိုသို့နှေးကွေးရခြင်းမှာ အဆိုပါ နိုင်ငံ များ၌ နည်းပညာအဆင့်မြှင့်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သော အရင်းအမြစ်နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ မရှိခြင်း ကြောင့်သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်းတို့ က အွန်လိုင်းနည်းပညာကို အပြည့်အဝအသုံးပြုရန် နှောင့်နှေးနေခြင်းကြောင့်သော်လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင်ပေသည်။
အခွန်ထမ်းတို့သည် အီလက်ထရွန်းနစ်နည်းပညာအားဖြင့် အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ရန် ယုံကြည်မှုမရှိခြင်းသည်လည်း ယေဘုယျဖြစ်နိုင်ချေတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြရာ၌ ပုံနှိပ်စာရွက်စာတမ်းများကိုသာ ပုံမှန်စံနှုန်းအဖြစ် လက်ခံထားရှိရာမှ အီလက် ထရွန်းနစ် လက်မှတ်များကိုသာ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ လက်ခံရန် ခက်ခဲနေခြင်းလည်း ဖြစ်ပေသည်။
Paying Taxes အစီရင်ခံစာသည် နိုင်ငံအစိုးရများ နှင့် အခွန်အာဏာပိုင်အသီးသီးတို့အား ယင်းတို့၏ အခွန် စနစ်နှင့် အခြားနိုင်ငံများ၏ အခွန်စနစ်တို့ဖြင့် နှိုင်းယှဉ် ချိန်ထိုးကာ ကောင်းသောအလေ့အထများကို သင်ယူ လေ့လာနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထုတ်ပြန်ပေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
Paying Taxes 2018 အစီရင်ခံစာအရ Total Tax and Contribution Ratio (TTCR) ၏ တစ် ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ပျမ်းမျှရာခိုင်နှုန်းမှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် တွင် ၄၀.၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ ယခင်နှစ်ကထက် ဝ.၁ ရာခိုင်နှုန်းမျှသာ တိုးလာခဲ့သည်ဟုဆိုသော်လည်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ၅၂ နိုင်ငံတို့တွင် TTCR မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး ၃၆ နိုင်ငံတွင် လျော့ကျလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အခွန်ထမ်းဆောင်ရန် ပြင်ဆင်မှုကြာမြင့်ချိန်မှာ လည်း ယမန်နှစ်ကထက် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၅ နာရီလျော့ကျ လာကာ နာရီ ၂၄၀ သာရှိသည်။ ငွေပေးချေမှုအရေ အတွက်သည်လည်း ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၂၄ ကြိမ်ရှိသည်။ ထိုသို့ ပြင်ဆင်မှုကြာမြင့်ချိန်ကို လျော့ချလာနိုင်ခဲ့ခြင်းမှာ အဓိကအားဖြင့် အခွန်ထမ်းနှင့် အခွန်အာဏာပိုင်တို့ နှစ်ဦး နှစ်ဖက်လုံးက အွန်လိုင်းကြေညာလွှာတင်သွင်း ခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်းများကို တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်လာနိုင်ခဲ့ခြင်း ကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။
Paying Taxes 2018 အစီရင်ခံစာက အခွန်ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအများအကြားကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး မကြာမီ အနာဂတ်အတွင်း ထပ်မံ၍ တွေ့ရှိရဦးမည်ဟုလည်း မျှော်လင့်ရပေသည်။
ဒေသအလိုက်ပျမ်းမျှ TTCR နှုန်းထား (၂၀၁၆)
ဒေသအလိုက်ပျမ်းမျှ TTCR ဇယားပြုစုရာ၌ Total Tax ခေါ် စုစုပေါင်းအခွန်ပေးဆောင်ငွေကို အမြတ်ခွန်၊ အလုပ်သမားအတွက် ကျသင့်သည့်အခွန်နှင့် အခြား အခွန်အများဟူ၍ ဒေသများအလိုက် ခွဲခြားထားမှုကို ဇယား(၂)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ဒေသအလိုက်အခွန်ထမ်းဆောင်ရန် ပြင်ဆင်မှုကြာ မြင့်ချိန်ဇယားပြုစုရာ၌လည်း ဇယား(၂)ကဲ့သို့ပင် အခွန် အမျိုးအစားသုံးမျိုးပေးဆောင်မှုပေါ်တွင် မူတည်၍ ဇယား(၃)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
အခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်းသည် အစိုးရအသုံးစရိတ်များအတွက် အရေးပါလှပေသည်။ သို့ဖြစ်၍ အခွန်ဆိုင်ရာမူဝါဒများသည်လည်း လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွက် ထင်ရှားသော သက်ရောက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အခွန်ဆိုင်ရာမူဝါရေးဆွဲသည့်ပုံစံနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့သည် နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးတွင် အသုံးပြုသော နည်းပညာနှင့်ဆက်စပ်ပတ်သက်မှုရှိသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးပြုသော အစိုးရအဖွဲ့များ သည် အခွန်ဆိုင်ရာမူဝါဒများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာ၌ သတင်းအချက်အလက်များပိုမိုစုဆောင်း ရရှိနိုင်ခြင်း၊ သာလွန်ကောင်းမွန်သော အခွန်စနစ်နှင့် မူဝါဒပုံစံများ ချမှတ်တည်ဆောက်ခြင်းစသည့် အားသာ ချက်များကြောင့် ပိုမိုထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းရှိကြ သည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို အသုံးပြုခြင်းသည် အခွန်ထမ်းနှင့် အခွန်အာဏာပိုင်တို့ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်လုံးအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်ထွန်း စေမည် ဖြစ်သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် Doing Business အစီရင်ခံစာ ၌ နိုင်ငံပေါင်း ၉၂ နိုင်ငံတို့တွင် အီလက်ထရွန်းနစ် နည်းပညာဖြင့် အခွန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ အပြည့်အဝ ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ Paying Taxes အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခဲ့သော လွန်ခဲ့သည့် ၁၂ နှစ်တာကာလအတွင်း နိုင်ငံပေါင်း ၆၆ နိုင်ငံတို့က ယင်းတို့ ၏ အခွန်စနစ်များကို ပိုမိုကောင်းလာစေရန် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို လက်ခံကျင့်သုံးလာခဲ့ကြသည်။ ဝင်ငွေ မြင့်မားသော OECD နိုင်ငံများ၏ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာသုံး အခွန်စနစ်များ အသုံးပြုနေပြီ ဖြစ်သည်။ ဥရောပနှင့်အာရှအလယ် ပိုင်းဒေသမှ နိုင်ငံ ၂၁ နိုင်ငံသည်လည်း အီလက်ထရွန်းနစ်နည်းပညာကို အခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံရာတွင် အသုံးပြုနေပြီဖြစ်သည်။
အခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံရေး ကိစ္စရပ်များတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ၏ အသုံးဝင်တာသွားပုံကို ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံအများအပြားက သိရှိနားလည်ကာ လိုက်နာကျင့် သုံးစပြုနေပြီဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်အခြေစိုက် CEO စီးပွားရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု မဂ္ဂဇင်းက ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ် ဦးမင်းထွဋ်က ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့က နေပြည်တော်တွင် သွားရောက်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့ရာ၌ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခွန်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲ မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဦးမင်းထွဋ်၏ ဖြေကြားချက်အချို့ ကို ထုတ်နုတ်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း အခွန်ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ စတင်ခဲ့ပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်တို့မှာ ပညာရှင်များ လာရောက်လေ့လာခဲ့ကြောင်း၊ ထိုစဉ်က ပြည်တွင်းအခွန် ဦးစီးဌာန၏ အခွန်နှင့်ဂျီဒီပီအချိုးမှာ ၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ ရှိကာ အလွန်ပင်နည်းပါးလှကြောင်း တည်ဆဲအခွန် ဥပဒေများသည်လည်း ခေတ်စနစ်နှင့်လျော်ညီမှုမရှိ သဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆောင်ရွက်သင့်သည်ဟု ပညာရှင်များက အကြံပြုခဲ့ကြောင်း ဦးမင်းထွဋ်က ပြောပြခဲ့သည်။
ပညာရှင်များ၏ အကြံပြုချက်ငါးချက်ရှိကာ ပထမ အချက်မှာ အခွန်ရုံးက စည်းကြပ်သည့်စနစ်အစား အခွန် ထမ်းကိုယ်တိုင်တွက်ချက် စည်းကြပ်သည့် စနစ်သို့ ပြောင်းလဲရန်၊ ဒုတိယအချက်မှာ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်း ခွန်ကို နိုင်ငံတကာတွင် ကျင့်သုံးသော ထပ်ဆင့်တန်ဖိုးခွန် (Value Added Tax-VAT)သို့မဟုတ် ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုခွန် (Goods and Service Tax-GST)အဖြစ် ပြောင်းလဲကျင့်သုံးရန် တတိယအချက်မှာ တစ်ခု တည်းသော အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်အမှတ်ပေးရန်၊ စတုတ္ထ အချက်မှာ ဒေတာစင်တာ (Data Center) များ တည် ထောင်ရန်၊ ပဉ္စမအချက်မှာ အိုင်တီနည်းပညာသုံးအခွန် စီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲ တစ်ရပ်ဝယ်ယူအသုံးပြုရန်တို့ဖြစ် ကြောင်း ဦးမင်းထွဋ်က ရှင်းပြခဲ့သည်။
အခွန်ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများကို အဆင့် နှစ်ဆင့် ခွဲခြားဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ မှ၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ အထိ ကာလကို ပထမငါးနှစ် တာ ကာလအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြောင်း ၂၀၁၇-၁၈ မှ ၂၀၂၁-၂၂ အထိ ကာလကို ဒုတိယငါးနှစ်တာ ကာလအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြောင်း သိရှိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် အစိုးရလက်ထက်အတွင်း အခွန်ထမ်း ကြီးများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးကို အခွန်ထမ်း ၄၅၀ ခန့်ဖြင့် အခွန်ထမ်းကိုယ်တိုင် စည်းကြပ်သောစနစ်သို့ ပြောင်းလဲ နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါအခွန်ထမ်းကြီများဆိုင်ရာ အခွန် ရုံးသည် ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနက ကောက်ခံရရှိသော အခွန်ငွေ၏ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ကောက်ခံပေးနေသည့် ရုံးဖြစ်ကြောင်း၊ အလယ်အလတ်တန်းဆိုင်ရာ အခွန်ရုံး (၁)ကိုလည်း အခွန်ထမ်းကိုယ်တိုင်စည်းကြပ်သည့် စနစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်း၊ ထို့အပြင် ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံ ကိုလည်း လုပ်ဆောင်မှုအခြေပြု ဖွဲ့စည်းပုံသို့ ပြောင်းလဲ နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်တွင် အလယ်အလတ်အခွန် ထမ်းများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးကို အခွန်ထမ်း ကိုယ်တိုင်စည်းကြပ်သည့်စနစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ကာ အလယ်အလတ် အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးကို ထပ်မံ ဖွဲ့လှစ်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပြီး လာမည့်နှစ်တွင် အခွန်ရုံး(၂)ကို လည်း အခွန်ထမ်းကိုယ်တိုင် စည်းကြပ်သည့် စနစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးမင်းထွဋ်က ရှင်းလင်း ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
မလေးရှားနိုင်ငံနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့တွင်ပင် Sales Tax မှ GST သို့ပြောင်းလဲရန်အတွက် ရှစ်နှစ်ခန့် အချိန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရကြောင်း ဦးမင်းထွဋ်က ရှင်းပြခဲ့သည်။
အခွန်ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ပြုလုပ်ရာတွင် ဥပဒေများအားလုံးသာမက အခွန်စနစ်တစ်ရပ်လုံးကိုပါ ပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် အခွန်ထမ်းများ အား လေ့ကျင့်သင်ကြားမှု၊ အခွန်ထမ်းများလိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းစေရေး အခွန်ပညာပေး လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်များ စသည်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန်ကိစ္စ များ များပြားသည့်အတွက် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဦးမင်းထွဋ်က ရှင်းပြခဲ့ သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်နှင့် မြန်မာ နိုင်ငံဘဏ်များအသင်းတို့ ပူးပေါင်းကာ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကုမ္ပဏီများကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လခန့်ကစတင်၍ အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှု စနစ်စတင်ကျင့်သုံးလုပ်ဆောင်နေ ကြောင်း ထိုကုမ္ပဏီများ၏ ငွေပေးချေမှု၊ အခွန်ပေး ဆောင်မှုများကို ငွေသားဖြင့်လက်ခံခြင်းမပြုတော့ဘဲ အွန် လိုင်းစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် အခွန်ထမ်းများအနေဖြင့် ကြန့်ကြာချိန်များသက်သာသွားမည် ဖြစ်သကဲ့သို့ အခြားသော လုပ်အားခနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်များ လည်း လျော့နည်းသက်သာစေမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးမင်းထွဋ်က ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနသို့ ဒေတာ စင်တာ(Data Center)များ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး i Tax (Integrated Tax Administration System) ခေါ် အခွန် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ချေးငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် ဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ထိုအကြောင်းကို အခွန် ဦးစီးဌာန ဝက်ဆိုဒ်တွင် ၄၅ ရက်ကြိုတင် ဖော်ပြထားခဲ့ ပြီး ဝယ်ယူရာ၌ အဆင့်နှစ်ဆင့်ဖြင့် စိစစ်ရွေးချယ်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးမင်းထွဋ်က ရှင်းလင်း ပြောကြားသွားခဲ့ပေသည်။
အခွန်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ စတင်ဆောင် ရွက်စဉ်က အခွန်ကောက်ခံရရှိမှုမှာ ဘီလီယံနှစ်ထောင် ကျော်မျှသာရှိသော်လည်း အခွန်ထမ်းများ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းလာသည့်အတွက် ယခုနှစ် အတွင်း ဘီလီယံခြောက်ထောင်ခန့် ရရှိမည်ဟု ခန့်မှန်း ထားကြောင်း ဦးမင်းထွဋ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အခွန်ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဥပဒေများ၊ စနစ်များအားလုံးကိုလည်း ပြုပြင်မည်ဖြစ် ကြောင်း၊ အခွန်ပညာပေးအစီအစဉ်များ တိုးမြှင့်ဆောင် ရွက်ခြင်း၊ အခွန်ထမ်းလိုက်နာမှု အားကောင်းလာစေရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခြင်း စသည်ဖြင့် ဘက်စုံကောင်းမွန် လာစေရန် ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်နေကြသည်ဖြစ်ရာ အခွန် ထမ်းမိဘပြည်သူများအနေဖြင့်လည်း ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ပေးကြပါရန် ဦးမင်းထွဋ်က ပန်ကြားသွားခဲ့ပေ သည်။
ဦးမင်းထွဋ်၏ ရှင်းလင်းပြောကြားချက်များ၌ ပါဝင်လာသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် မကြာမီစတင်အသုံးပြု တော့မည့် i Tax ခေါ် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအခြေပြု အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းကို Deutsche Gesellschaft Fiir International Zusammenarbeit(GTZ) GmbH က ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ထုတ်ဝေခဲ့သော Benefits ofaComputerized Integrated System of Taxation: i Tax Case Study အမည်ရစာတမ်းမှ အကျဉ်းမျှထုတ်နုတ်ကာ မိတ်ဆက်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
i Tax ဆိုသည်မှာ
i Tax ဆိုသည်မှာ (ဒေသအစိုးရများနှင့်) နိုင်ငံအစိုးရများ အသုံးပြုသော ခေတ်မီကွန်ပျူတာနည်းပညာ အခြေပြု အခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံမှု ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်သည်။ i Tax သည် နိုင်ငံတစ်ရပ်၏ ရရန်၊ ပေးရန်ရှိသော သက် ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို တစ်ဦးချင်းစာရင်း ဖွင့်လှစ်ကာ သတင်းအချက်အလက် သိုမှီးထားသော နိုင်ငံတော်၏ငွေစာရင်းနှင့် တွက်ချက်မှုဆော့ဖ်ဝဲဖြစ် သည်။ ဤသို့ သတင်းအချက်အလက်အပြည့်အစုံသိုမှီး ထားခြင်းဖြင့် အခွန်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကို စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
i Tax ကို အသုံးပြုမည်ဆိုပါက အခွန်ငွေကောက်ခံ ရာတွင် တိုးတက်မှုရှိစေခြင်း၊ ငွေကြေးစီမံအုပ်ချုပ်မှု တွင် ပွင့်လင်းမြင်သာရှိစေခြင်းနှင့် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတော် အဆင့်အခွန်အာဏာပိုင်တို့၏ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကို လည်း ထင်သာမြင်သာရှိစေခြင်း စသည့် ထိရောက်၍ အကျိုးရှိသောနည်းလမ်းများကို အလွယ်တကူဆောင်ရွက် နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
နည်းပညာရပ်အားဖြင့် ဆိုရပါက i Tax သည် အခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်းအတွက် အိုင်တီအခြေပြု နည်းပညာဖြင့် အပိုင်းလိုက်ဖွဲ့စည်းရေးဆွဲထားသော ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲတစ်ရပ်ဖြစ်ကာ အသုံးပြုမည့် အခြေ အနေသဘောသဘာဝနှင့် ကိုက်ညီစေရန် လွတ်လပ်စွာ မွမ်းမံပြင်ဆင်ရေးဆွဲနိုင်သည့် Data Base တစ်ခုလည်း ပါဝင်သည်။ i Tax ဖြင့် အခွန်အမျိုးအစားအားလုံးကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ i Tax သည် မှတ်ပုံတင် ခြင်း၊ စည်းကြပ်ခြင်း၊ ကောက်ခံခြင်း၊ စာရင်းကိုင်ခြင်း၊ အြွေကးကျန်ငွေစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ စာရင်းစစ်ခြင်း၊ အခွန်ပေး ဆောင်မှု ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အစီရင်ခံစာထုတ် ပြန်ခြင်း စသောလုပ်ငန်းများကို အခွန်အာဏာပိုင်တို့ အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
i Tax ကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် တစ်ဖက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်သည်။
၁။ အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုကို လွယ်ကူစေသည်။ အခွန်အမျိုးအစားအားလုံးကို စနစ်တစ်ရပ်တည်းဖြင့်
ဒေသတွင်းသာမက နိုင်ငံတော်အဆင့်အထိပင် ကိုင်တွယ်နိုင်သည့်စနစ်ဖြစ်သည်။
၂။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေသည်။ i Tax ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လိုင်စင်ကြေးများ ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ i Tax သည် ပွင့်လင်းလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုနိုင်သော ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
၃။ i Tax စနစ်သည် အပြည့်အဝတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်၍ လျင်မြန်စွာအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်
အသုံးပြုမည့် အခွန်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကိုက်ညီစေရန် ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
၄။ နိုင်ငံတစ်ရပ်၏ အခွန်စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်မှ လိုအပ်ချက်များကို ကွန်ပျူတာနည်းပညာအခြေပြုစနစ်
၅။ အခွန်ကိစ္စအများအပြားကို တစ်ပြိုင်တည်း ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် ရှေ့ပြေးစီမံကိန်းသတ်မှတ်ထားသော ပြည်နယ်နှစ်ခု၌ အခွန်ထမ်းလေး သိန်းကျော်ကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။
၆။ i Tax သည် အစိတ်အပိုင်းအလိုက် ဖွဲ့စည်းထားသောစနစ်ဖြစ်၍ အခါအားလျော်စွာ ပေါ်ပေါက်လာ
သော လိုအပ်ချက်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များကို အလွယ်တကူတိုးချဲ့နိုင်သည်။
၇။ i Tax သည် အခွန်စည်းကြပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုတို့ကို ပိုမိုလျင်မြန်လာစေသည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၌ အခွန်ထမ်းတစ်ဦးက သူ၏အခွန်စာရင်းသတင်းအချက်အလက်များအတွက် စောင့် ဆိုင်းချိန်၊ လေးနာရီကြာမြင့်ရာမှ စောင့်ဆိုင်းချိန် သုံးမိနစ်အထိ လျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။
၈။ i Tax သည် နိုင်ငံ၏ အခွန်စီမံအုပ်ချုပ်မှုကို ပိုမိုထိရောက်စေပြီး အခွန်ငွေကောက်ခံရရှိမှု မြင့်မား
တန်ဇန်းနီးယားနိုင်ငံ၌ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် အခွန်ငွေကောက်ခံရရှိမှုမှာ တစ်လလျှင် အမေရိကန်
ဒေါ်လာ ၂၅ သန်းသာရှိရာမှ င ွှထေ အသုံးပြုပြီးနောက် ၂၀ဝ၇ ခုနှစ်တွင် လစဉ်အခွန်ငွေကောက် ခံရရှိမှုများ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းသုံးရာအထိ မြင့်တက်ခဲ့သည်။
၉။ i Tax သည် ဒေသခံဝန်ထမ်းတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြင့်တက်စေနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီး
အိုင်တီနည်းပညာဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် အိုင်တီ နည်းပညာဝန်ထမ်းများက i Tax စနစ်တပ်ဆင် ခြင်း၊ လိုအပ်သည့်မွမ်းမံပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်ခြင်းနှင့် စနစ်အားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့တွင်ပါဝင် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
၁၀။ i Tax သည် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး အနာဂတ်အာမခံရှိသောစနစ် ဖြစ်သည်။
နည်းပညာသစ်များ ထပ်မံထွက်ပေါ်လာပါက i Tax စနစ်အတွင်းသို့ အလွယ်တကူထည့်သွင်း
အခွန်စီမံအုပ်ချုပ်မှုတွင် ပါဝင်သော အဓိကအစိတ်အပိုင်းများမှာ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စည်းကြပ်ခြင်း၊ ကောက်ခံခြင်း၊ အခွန်ပေးဆောင်မှုစာရင်းသွင်းခြင်း၊ ထိန်းကျောင်းခြင်း၊ အခွန်စာရင်းစစ်ခြင်း၊ အစီရင်ခံခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ကြသည်။
မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုသည်မှာ အခွန်ထမ်းဆောင်ရန် အကြောင်းပေါ်ပေါက်သော အခွန်ထမ်းပုဂ္ဂိုလ်များအား လုံးနှင့် ထိုသို့တာဝန်သက်ရောက်စေသော အကြောင်း အရာများကို သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်၊ မှတ်ပုံတင်စာရင်း ရေးသွင်းခြင်း ဖြစ်သည်။
စည်းကြပ်ခြင်းဆိုရာတွင် အခွန်ထမ်းပုဂ္ဂိုလ်၏ အခွန်ပေးဆောင်ရန် တာဝန်များကို အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ယင်း၏စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကို တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးခြင်း စိစစ်အတည်ပြုခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။
ကောက်ခံခြင်းဆိုသည်မှာ အခွန်ထမ်းပုဂ္ဂိုလ်က ပေး ရန် အချိန်စေ့ရောက်သော အခွန်များကို ကောက်ခံခြင်း၊ အခွန်ပေးဆောင်ငွေကို လက်ခံရယူခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။
အခွန်စာရင်းရေးသွင်းခြင်းဆိုသည်မှာ အခွန်ထမ်း၏ ငွေပေးဆောင်မှုကို ယင်း၏အခွန်စာရင်းတွင် ရေး သွင်းခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိန်းကျောင်းခြင်းဆိုသည်မှာ အခွန်တာဝန်ထမ်း ဆောင်ရန် ပျက်ကွက်သူတို့ကို သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ခြင်း နှင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း၊ ဥပဒေထိန်းကျောင်းခြင်း၊ အခွန် ကောက်ခံခြင်းတို့ ပါဝင်သော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ကို စနစ်တကျ ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အခွန်စာရင်းစစ်ခြင်းဆိုသည်မှာ အခွန်ကြေညာလွှာများကို မျှတကောင်းမွန်သော ရွေးချယ်မှုစနစ်တစ်ရပ် အားဖြင့် စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း ဖြစ်သည်။
အစီရင်ခံခြင်းဆိုသည်မှာ စည်းကြပ်ကောက်ခံရရှိသော အခွန်ဝင်ငွေများကို ဆန်းစစ်လေ့လာသည့် အစီ ရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
e-Government ဆိုသည်မှာ အစိုးရအဖွဲ့တစ်ရပ်၏ အုပ်ချုပ်ရေးဆောင်ရွက်မှုများ တိုးတက်လာစေရန် အိုင်တီနည်းပညာ ခေါ် သတင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်း ပညာအသုံးပြုဆောင်ရွက်သည့်စနစ် ဖြစ်သည်။ e-Government စနစ်သည် နိုင်ငံတစ်ရပ်အတွက် အရေးပါ သော ကဏ္ဍတစ်ရပ် ဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာနည်းပညာ သုံးစွဲခြင်းနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု များမရှိပါက စက်မှုထွန်းကားပြီးသောနိုင်ငံများနှင့် ဖွံ့ဖြိုး ဆဲနိုင်ငံများအကြားမှ ကွာခြားမှုကွက်လပ်မှာ ပိုမိုကျယ် ပြန့်သွားမည် ဖြစ်သည်။
e-Government စနစ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးတိုး တက်ခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်သည်။ ကွန်ပျူတာနည်းပညာသုံးစွဲခြင်း၏ အဆုံးသတ်မျှော်မှန်း ချက်မှာ ပြည်သူသို့ ဝန်ဆောင်မှုကောင်းများ ပေးရန် ဖြစ်သည်။ ထိုမျှော်မှန်းချက်ကို ဆောင်ကြဉ်းနိုင်ရန်အတွက် အဆုံးမရှိသော နည်းပညာကို လိုအပ်သည်။ ရေရှည်နိုင်ငံရေးကတိကဝတ်များနှင့် လက်ရှိအနေအထားအပေါ် ထိန်းကျောင်းကြီးကြပ်အကဲဖြတ်ခြင်းတို့သည် အရေးပါသောအခြေခံအချက်များ ဖြစ်သည်။ ထို့ အပြင် လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုနှင့် နည်းပညာ ရပ်ဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရှိရန်လည်း လိုအပ်သည်။
စင်စစ်တွင် သုံးစွဲသူ၏တောင်းခံမှုအပေါ် နားလည် ခြင်းသည် လုံလောက်သော နည်းပညာအဖြေတစ်ရပ် ရရှိစေရေးအတွက် အထူးပင်အရေးပါသည်။ e-Government အုပ်ချုပ်မှုစနစ်အများအပြားတွင် အထက်မှ အောက်သို့ ချဉ်းကပ်သည့်ပုံစံများကို သုံးစွဲမှုကြောင့် စောစီးစွာပင် ကျရှုံးကြရလေ့ရှိသည်။ အောင်မြင်သော e-Government တစ်ရပ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင် ရေးတွင် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတို့၏ဆန့်ကျင်မှုက အကြီးမား ဆုံးသော စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်တတ်သည်ကိုလည်း သတိချပ်ရမည် ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးသည် e-Government နှင့် ယင်းစနစ်အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရာတွင် အထူးတလည် အရေးပါလှသည်။ ကောင်းစွာလေ့လာ ရေးဆွဲထားသော စီမံကိန်းများ ချမှတ် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် e-Government လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်လုံးတွင် ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်းများ လိုလားစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည် ဖြစ်ရာ ယင်းတို့သည် နိုင်ငံ၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ တွင် အရေးပါသောသူများ ဖြစ်လာပေမည်။
e-Government တစ်ရပ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အလုံးစုံသော အခြေအနေတို့ကို လွှမ်းခြုံနိုင် စွမ်းရှိသည့် အဖြေမျိုး မရှိသေးပါ။ နိုင်ငံတိုင်းသည် ယင်းတို့၏ e-Government ဗျူဟာနှင့် အစီအစဉ်များကို ယင်းတို့၏ တစ်နိုင်ငံချင်းစီ၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ ဦးစားပေးဆောင်ရွက် ရန်များ ဘဏ္ဍာရေး အခြေအနေ၊ လူသားအရင်းအမြစ်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင် နိုင်စွမ်းများအပေါ် အခြေပြုစဉ်းစား တွက်ချက်ကာ ကိုယ် တိုင်ရေးသားချမှတ်ကြရမည် ဖြစ်သည်။ အကျိုးရှိ ထိရောက်သော e-Government တစ်ရပ် အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် အဓိကအချက်မှာ နည်းပညာနှင့် လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုအပေါ် အခြေပြုသော ဘက်စုံချဉ်းကပ်မှုတစ်ရပ်ပင် ဖြစ်သည်။
အောင်မြင်သော i Tax စနစ်တစ်ရပ်အတွက် လိုအပ်ချက်များ
အောင်မြင်သော i Tax စနစ်တစ်ရပ် ထူထောင်နိုင် ရေးအတွက် ပထမအဆင့်အနေဖြင့် ဦးဆောင် ကော်မတီ တစ်ရပ်နှင့် လုပ်ငန်းအစုများကို ဖွဲ့စည်းရမည်ဖြစ်သည်။ ဦးဆောင်ကော်မတီသည် စီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍကို တာဝန်ခံ ရမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းအစုများက i Tax စနစ်ဖော်ဆောင် ရေးအစီအစဉ်များကို တာဝန်ခံဆောင် ရွက်ကြရမည် ဖြစ် သည်။ ထို့အပြင် အခွန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးမျှော်မှန်းချက်များကိုလည်း ရေးဆွဲချမှတ်ရန် လိုအပ်သည်။
ထို့နောက်တွင် အသုံးပြုမည့် i Tax စနစ်အတွက် ရည်မှန်းချက်များကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ရေးဆွဲသတ်မှတ်ရမည်။
ရည်မှန်းချက်များ ရေးဆွဲပြီးနောက် လက်ရှိကြုံတွေ့ နေရသော ပြဿနာအခက်အခဲများ၊ အကန့်အသတ် အဟန့်အတားများနှင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသော ဆန့် ကျင်စိန်ခေါ်မှုများကို ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းအားဖြင့် ရရှိ နိုင်မည့် အရင်းအမြစ်များကို အကဲဖြတ်ရမည်။
လက်ရှိအနေအထားကို ကောင်းစွာသုံးသပ်အကဲ ဖြတ်ပြီးပါက အသုံးပြုမည့် i Tax ဆော့ဖ်ဝဲအား မိမိ နိုင်ငံ၏ အခွန်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘောသဘာဝနှင့် အကောင်းဆုံးကိုက်ညီမှုရှိစေရန် ပြုပြင်မွမ်းမံရေးဆွဲ ရမည်။
ထို့နောက်တွင် လိုအပ်သော ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲတို့ကို ဝယ်ယူတပ်ဆင်ကာ သတင်း အချက်များ ကောက်ခံခြင်းပြုရမည်။ သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိပါက i Tax စနစ်ကို စမ်းသပ်သုံးစွဲခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ ကို လေ့ကျင့်ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
ထို့နောက်တွင် i Tax စနစ်ကို ရှေ့ပြေးစီမံကိန်းဒေသ များ သတ်မှတ်၍ လည်ပတ်သုံးစွဲရမည်။ ရှေ့ပြေးစီမံ ကိန်းဒေသများတွင် လုပ်ငန်းအဆင်ပြေချောမွေ့မှုရှိလာ ပါက အခြားသောဒေသများတို့ပါ တိုးချဲ့အကောင် အထည်ဖော်ကာ လုပ်ငန်းလည် ပတ်သွားရန်ဖြစ်သည်။
i Tax စနစ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မိတ်ဆက်ဖော်ပြခဲ့သော အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာများမှာ တန်ဇန်နီးယား နိုင်ငံနှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့တွင် ရှေ့ပြေးစီမံကိန်းဒေသ များ ချမှတ်၍ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရာမှ ရရှိလာသော အတွေ့အကြုံဗဟုသုတတို့ကို ထုတ်နုတ်ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနိုင်ငံများတွင် i Tax စနစ် သုံးစွဲခြင်း ကြောင့် များပြားသော အကျိုးကျေးဇူးများရရှိပုံကို မျက် မြင်တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး Paying Taxes အစီရင်ခံစာ က အလေး ထားဖော်ပြသော TTCR အချိုးနှင့် အခွန်ထမ်းဆောင်ရန် ပြင်ဆင်မှုကြာမြင့်ချိန်တို့နှင့်ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း သောရလဒ်များ ထွက်ပေါ်လာစေခဲ့သည်ကို တွေ့မြင်ရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ခေတ်စနစ်နှင့် မလျော်ညီ သော အခွန်ဆိုင်ရာဥပဒေများကြောင့် အခွန်ထမ်းပြည်သူ များက အခွန်ပေးဆောင်ကို တတ်နိုင်သမျှ လျှော့ချနိုင် ရန် အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းများ၏အကူအညီဖြင့် ကြိုးပမ်း ခြင်း၊ အစဉ်အဆက်သော အစိုးရအဖွဲ့များက ထုတ်ပြန် ခဲ့သည့် ဂျီဒီပီကိန်းဂဏန်းများမှာလည်း နိုင်ငံပိုင်စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းများမှ ကိန်းဂဏန်းလှပစေရန် ရေးဆွဲထား သည့်အစီရင်ခံစာများအပေါ်တွင် အခြေပြုခဲ့ရခြင်းတို့ ကြောင့် နိုင်ငံ၏အခွန်ရရှိမှုဝင်ငွေနှင့် ဂျီဒီပီအချိုးမှာ အရှေ့တောင်အာရှဒေသအတွင်း၌ အနိမ့်ဆုံးဖြစ်ရုံ သာမက ကမ္ဘာ့အဆင့်တွင်လည်း အနိမ့်ဆုံးဆယ်နိုင်ငံ စာရင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့ရပေသည်။
လက်ရှိကာလတွင် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနက ဦးဆောင်၍ အခွန်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆောင်ရွက်လာနေပြီဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့အဆင့်မီအိုင်တီနည်း ပညာသုံးအခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက် နိုင်တော့မည် ဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးဆော့ဖ်ဝဲဆို သည်မှာ သတင်းအချက်အလက်မပါရှိဘဲ လည်ပတ် သုံးစွဲနိုင်မည် မဟုတ်သကဲ့သို့ ကောက်ခံရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ မှန်ကန်တိကျမှုရှိရေး ဥပဒေ ထိန်းကျောင်းမှုအားကောင်းရေးတို့သည်လည်း ခေတ်မီ အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တစ်ရပ်သို့ အောင်မြင်စွာကူးပြောင်း နိုင်ရေးအတွက် အရေးပါလှသည်။
ထို့အပြင် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ၏ စနစ်သစ်အပေါ် လက်ကမ်းကြိုဆိုမှု ယင်းတို့၏ စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်နှင့် ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာပြည့်ဝရေးတို့သည်လည်း မရှိမဖြစ် အရေးပါလှသည်ဖြစ်ရာ အစိုးရအနေဖြင့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း များ၏ ကဏ္ဍကို အထူးအလေးထားသင်ပေး သည်။
ခေတ်မီအခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော အခြားအချက်တစ်ရပ်မှာ e-Government စနစ်ထူထောင်ရေးပင်ဖြစ်ပြီး ထိုသို့ထူထောင်ရာ၌ အောက်ခြေဝန်ထမ်းများ၏သဘောထားကို အလေးထား ထားသော ချဉ်းကပ်မှုမျိုးဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားရန်လည်း အရေးကြီးပေသည်။ အထက်မှအောက်သို့ ချဉ်းကပ် သည့်ပုံစံမျိုးသည် e-Government စနစ်နှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိသည်ကို သတိချပ်ရမည် ဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ တည်ကြည် ဖြောင့်မတ်သော ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် ပြည်တွင်း အခွန်များဦးစီးဌာန၏ အခွန်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု များကို နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကပါ ပါဝင်ပံ့ပိုးဆောင် ရွက်ပေးနေပြီဖြစ်ရာ အခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်း ဆိုင်ရာကိစ္စတွင် အဓိကအကျဆုံးသော အခွန်ထမ်းမိဘ ပြည်သူများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် မကြာမီကာလ အတွင်း ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအစိုးရတစ်ရပ်အတွက် အရေးပါ လှသည့် အောင်မြင်သောအခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တစ်ရပ် ထွက်ပေါ်လာမည်ဟု မျှော်မှန်းကာ ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုရေး သားဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။
Reference; 1) Benefits ofaComputerized Integrated System for Taxation:
i Tax Case Study by Deutsch Gesellschaft fiir Internationale Zusammenarbeit
(GTZ) Gmbtl, February 2011.
2) DG’s Interview with CEO Magazine 05 Apr 2018.
3) Tax Reforms in Myan by Aung Thein, Assist Director, Internal Revenue Dept.
4) List of Countries by Tax Revenue to GDP(Wikipedia)
5) Paying Taxes 2018, by World Bank and PWC Uk